खाडीमा घरेलु महिला हरुलाई आफ्नो मालिक बाट यस्तो बलात्कारको सिकार हेर्नुस् भिडियो सेयर गरि सहयोग गरौं – Simple Khabar
बिरानो देशमा चेलीको चित्कार
‘साउदी अरबमा आएका नेपाली घरेलु कामदारको बारेमा सबैले जानकारी लिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यी सबै महिला कामदार आफ्नो घर-गाउँको नाताको/चिनेजानेको/दलालको सहयोगमा राहदानी बनाइ भारतको बाटो हुँदै बम्बइ पुग्छन्।
र, त्यहाँ म्यानपावर एजेन्टले भिसा उपलब्ध गराएपछि साउदी अरबलगायत खाडी मुलुकमा आउँछन्। केही अरुको राहदानी प्रयोग गरी आउने गरेका छन्। धेरैले परिवारको सहमती नै नलिइ हिंडेका हुन्छन्।
कसैले नगद २०-३० हजार रुपैंया आफूलाई पठाइदिने व्यक्ति वा दलाललाई बुझाएका हुन्छन् त कसैले नेपाल फर्किएपछि दिने बाचा गरेका हुन्छन्।
त्यस अवधीमा अर्को साहुले ती कामदारलाई खरिद गरी लगेमा पहिलेको साहुको रकम फिर्ता हुन्छ। यस क्रममा कुनै महिला कामदारहरुले ७-८ साहुहरुको खरिदबिक्रीको साधन बनिसकेको सत्यतथ्य पनि व्यक्त गरेका छन्।
आपूर्ति केन्द्रबाट पुन बिक्री हुन नसकेका वा बिरामी भइ काम गर्न नसक्ने कामदारहरुलाई सम्बन्धीत साहु र आपूर्ति केन्द्रले राजदुताबासको गेटमा लगी छाडिदिने गरेका छन्।’
अन्य समाचार, लिवर अर्थात् कलेजोको सम्पूर्ण फोहोर वा खराबीलाई एकपटकमै हटाउने यो गोप्य घरेलु औषधी ! लिवर यानिकी कलेजोले हाम्रो शरीरमा एक केमिकल फ्याक्ट्रीले जस्तै काम गर्छ।
अर्थात् तपाइँ जत्ति पनि बाहिरको जंक फुड, तेलमा तारेको भोजन, जाँड रक्सी र अनेकौं केमिकलयुक्त औषधी लगायतका पदार्थ खाएपनि यी चिजहरु बाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई कलेजोले शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ।
भोजन खाएपछी कलेजोले उक्त भोजनबाट आवश्यक पोषण तत्व ग्रहण गरेर शरीरको दोस्रो भागमा पुर्याउँछ ।
त्यसकारण प्रारम्भिक चरणमै लिवरमा आउने खराबी बारे सचेत हुनु एकदम जरुरि छ। किनकि ८० % लिवरको खराबीको बिमारीलाई औषधीले काम गर्दैन। प्राकृतिक चीज वा आयुर्वेदिक चीजहरुले मात्र यस समस्याको समाधान गर्छ।
त्यसकारण आज हामी लिभरको खराबीलाई जरै देखि हटाउने अर्थात् निर्मुल पार्ने घरेलु उपचार विधिको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। लिवरको घरेलु उपचार विधि एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नु पर्छ।
यसको लागि सुरुमा बाहिरको जंक फुड, तारेको खाना वा मसलेदार खाना कम्तिमा पनि ६ दिन सम्म सेवन नगर्नुहोस्। केवल घरमा बनाएको सादा खाना मात्र सेवन गर्नु होस् । खानामा आधा भन्दा बढी सलाद नै समावेश गर्नु पर्छ।
५/६ दिनसम्म यस्ता खाना हरुको कन्ट्रोल गरेमा लिवरलाई सफा गर्ने घरेलु औषधीले पूर्ण रुपमा काम गर्छ। यो प्रक्रियाको बीचमा १/२ दिन फलफुल मात्र सेवन गर्नु पर्छ।
२. मुलाको पात: मुलाको पातमा भिटामिन A, B र C पाइन्छ। यसमा अधिक मात्रामा फाइबर हुने भएकोले यसले हाम्रो पाचनलाई राम्रो बनाउँछ र लिवरको कार्य क्षमतालाई पनि बढाउँछ। यसको लागि मुलाको पातलाई राम्ररी पखालेर जुस बनाउने।
यो जुसलाई हरेक दिन खाना खाए पछी पिउने। यो जुस लगातार ६/७ दिन सम्म पिउनले लिवरसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरुलाई हटाउँछ।
३. किसमिसको पानी: करिब ५०० एम एल पानीमा एक कचौरा किसमिस रातभरी भिजाएर राख्ने। बिहान पानीलाई छान्ने र यस पानीलाई बिहान खाली पेटमा थोरै पिउने । साथै पुरै दिन एक एक घण्टाको अन्तरालमा यस किसमिसको पानी थोरै थोरै गर्दै पिउने।
त्यस्तै भिजेको किसमिस लाई बिहान खाजाको साथ वा बेलुका सेवन गर्न सकिन्छ। लगातार ३ दिन सम्म किसमिसको पानी खानाले लिवर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या बिस्तारै हट्छ र लिवर स्वस्थ हुन्छ।
४. गहुँको जुस: गहुँमा क्लोरोफिलको मात्रा अधिक हुन्छ। साथै यो एक शक्तिवर्द्वक एन्टीअक्सिडेन्ट हो। गहुँको जुसको सेवनले लिवर सम्बन्धी सम्पूर्ण बिमारीलाई दुर गराउँछ। गहुँको जुस जुनसुकै आयुर्वेदिक पसलहरुमा किन्न पाइन्छ।
यी साधारण घरेलु चीज वा उपचार विधिले लिवर सम्बन्धी सम्पूर्ण खराबी वा बिमारीलाई संधैको लागि हटाई लिवरलाई स्वास्थ्य र स्वच्छ बनाउँछ। एजेन्सी
हुनत आजभोलि गर्भवती भए नभएको कुरा पत्ता लगाउने अनेक उपाय छन् ।
प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट प्रयोग गरेर गर्भ यकिन गर्न सकिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यस्ता परीक्षण गर्ने विधीहरु सर्वसुलभ हुँदैनन् । यस्तो बेला कसरी थाहा पाउने आफू गर्भवती भएको कुरा ?
यौन जिज्ञासा समाचार
PREVIOUS POST Previous post: ओखलढुङगामा स्कारपियो दुर्घटना यसरि भयो ७ जनाको मृत्यु २ घाईते
NEXT POST Next post: पहिलो यौन सम्पर्कमा युवतीले चाहाने दश कुरा
विदेश जाने क्रममा श्रीमतीले चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति गर्न दिए यस्तो उपहार (9,374)
खाडीमा घरेलु महिला हरुलाई आफ्नो मालिक बाट यस्तो बलात्कारको सिकार हेर्नुस् भिडियो सेयर गरि सहयोग गरौं (3,908)